Vaovao - Ahoana ny fomba hiatrehana ireo fitaovana fandrahoana vy namboarina
Fitaovana fandrahoana vy
Ahoana ny fomba hiatrehana ireo fitaovana fandrahoana vy namboarina
Ny lakozia fandrahoana vy nolovanao na novidinao tamin'ny tsenambola dia matetika no manana akorandriaka mafy vita amin'ny harafesina mainty sy loto, izay tena tsy mahafinaritra. Aza manahy anefa fa afaka esorina mora foana izy ity ary azo averina amin'ny endriny vaovao ny vilany vy.
1. Atsofohy ao anaty lafaoro ilay vilany fandrahoana vy. Ataovy indray mandeha ny programa manontolo. Izy io koa dia azo dorana amin'ny afon-tsampona na arina mandritra ny 1/2 ora mandra-pahatonga ilay mena-by handrahoana ho mena mena. Hitresaka, hianjera ary ho lasa lavenona ilay akorandriaka mafy. Andraso hangatsiaka ny lapoaly ary araho ireto dingana manaraka ireto.Raha esorina ny akorandriaka mafy sy ny harafesina, esory amin'ny baolina vy.
2. Sasao amin'ny rano mafana sy savony ilay vilany fandrahoana vy. Hamafa amin'ny lamba madio.
Raha mividy fandrahoan-tsakafo vy vaovao ianao dia nofonosina menaka na fonosana mitovy amin'izany hisorohana ny harafesina. Ny menaka dia tsy maintsy esorina alohan'ny fanariana ny fitaovana fandrahoan-tsakafo. Ilaina io dingana io. Mandrosoa anaty rano misy savony mafana mandritra ny 5 minitra, avy eo sasao ny savony ary maina.
3. Avelao ho maina tsara ny vilany fandrahoana vy. Azonao atao ny manafana ny lapoaly eo am-patana mandritra ny minitra vitsy mba hahazoana antoka fa maina izy io. Mba hiatrehana ny fitaovana fandrahoana vy dia tokony hiditra tanteraka ao anaty metaly ny menaka, fa ny menaka sy ny rano kosa tsy mifanaraka.
4. Arosoy lard ny atiny sy ivelan'ny vilany fandrahoana, karazana menaka hena na menaka katsaka. Tandremo ny fonon'ny vilany.
5. Atsofohy ao anaty lafaoro ny lapoaly sy ny fonony ary ampiasao hafanana ambony (150 - 260 ℃, araky ny safidinao). Afanaina mandritra ny adiny iray farafahakeliny mba hamoronana sosona ivelany "voatsabo" ivelan'ny lapoaly. Ity sosona ivelany ity dia afaka miaro ny vilany amin'ny harafesina sy ny dity. Apetraho amin'ny sombin-taratasy aluminium na taratasy fametahana lovia lehibe eo ambanin'ny na eo ambanin'ny lovia fanaova, avy eo alatsaho ny menaka. Mangatsiatsiaka amin'ny hafanan'ny efitrano ao anaty lafaoro.
Fotoana fandefasana: Jul-01-2020
Ahoana ny fomba hiatrehana coo vy an-karama ampiasaina ...
Ny lakozia fandrahoana vy nolovanao na novidinao tamin'ny tsenambola dia matetika no manana akorandriaka mafy vita amin'ny harafesina mainty sy loto, izay tena tsy mahafinaritra. Aza manahy anefa fa afaka esorina mora foana izy ity ary azo averina amin'ny endriny vaovao ny vilany vy. 1. Atsofohy ao anaty ova ilay vilany fandrahoana vy ...